Vaovao - 2017.30.3 Orinasa Oman Petroleum Services
2017.30.3 Orinasa misahana ny petrole ao Oman
Miarahaba an'i Andriamatoa Shan avy any Oman hitsidika an'i Cepai
Tamin'ny 30 martsa 2017, Andriamatoa Shan, ny tale jeneralin'ny Middle East Petroleum Services Company ao Oman, niaraka tamin'ilay mpandika teny Andriamatoa Wang Lin, dia nitsidika an'i Cepai manokana.
Ity no fitsidihan'i Andriamatoa Shan voalohany an'i Cepai. Talohan'ity dia fitsidihana ity, Liang Yuexing, mpitantana ny varotra ivelany an'ny orinasanay, dia nitsidika ny Middle East Petroleum Services Company ary nampahafantatra an'i Mr. Shan ny fampandrosoana sy ny vokatra. Noho izany, Andriamatoa Shan dia feno fanantenana ny amin'ity dia ity tany Cepai.
Taorian'ny fitsidihana iray andro, Andriamatoa Shan dia nitsidika ny atrikasa famokarana, fitaovana fanaraha-maso, toeram-pivoriana ary ny kalitaon'ny vokatra isan-karazany an'ny orinasa. Nanana fifampiraharahana tamin'ny antsipiriany sy amin'ny antsipiriany izy niaraka tamin'i Liang Yuexing, mpitantana ny departemantan'ny varotra ivelany an'ny orinasanay. Ny roa tonta dia nahatratra marimaritra iraisana fiaraha-miasa amin'ny varotra.
Talohan'ny nandehanany dia nidera ny orinasa Andriamatoa Shan ary naniry ny hivoaran'ny orinasa matanjaka kokoa sy hahomby kokoa, ary haharitra sy hahafaly ny fiaraha-miasa amin'ny orinasa!